MacOS ဘာသာစကားပေါ်တွင်စနစ်နှင့်ကီးဘုတ် layout ကိုပြောင်းလဲပါ
ရုံ MacOS မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသူအသုံးပြုသူများ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို၏အတော်လေးတွေအများကြီးသင်သာ Windows ကိုပေါ်မှာဤအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အလည်းမရှိ။ တစ်ဦးအစပြုသူရင်ဆိုင်ရစေခြင်းငှါမူလတန်းအလုပ်များကိုတစ်ခုမှာ, ထို operating system ကို၏ "ပန်းသီး" တွင်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Windows operating system လိုပါပဲ, မော်ကွန်းတိုက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု tool ကိုအတွက်ပါဝင်တဲ့, MacOS လည်းအစပိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သောနှင့်ပြည့်စုံ။ သို့သော် built-in archive ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်ကန့်သတ်သည် - မော်ကွန်းတိုက် Utility ကို, ထို operating system ကို၏ "ပန်းသီး" သို့ဘက်ပေါင်းစုံ, ကသာကို formats ZIP ဖိုင်နဲ့ GZIP (GZ) နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။
MacOS ထဲမှာ "Task Manager ကို" start လုပ်နည်း
, MacOS ဖို့ကို Windows ကနေ "ရွှေ့ပြောင်း" မေးခှနျးမြားစှာမေး, အကျွမ်းတဝင် operating system ကိုအတွက်လိုအပ်သောအစီအစဉ်များနှင့် tools တွေကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားမှသာကြောင်းအဖွဲ့ဝင်များ။ ဤအထဲမှတစ်ဦးက "Task Manager ကို" ဖြစ်ပါသည်, ယနေ့ကျနော်တို့က Apple အနေဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်ပေါ်မှာဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
သိသာရငျးနှီးမှုတိုးပှားလုံခြုံရေးရှိနေသော်လည်း Apple ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ operating system ကို, သေး torrent ဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးပါသည်။ torrent client ကို - Windows နဲ့အမျှ MacOS တွင်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးအထူးပြုအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဤအပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များတွင်ယနေ့ကြှနျုပျတို့အားပွောပါလိမ့်မယ်။
MacOS များအတွက် antivirus
နည်းပညာ Apple ရဲ့လူကြိုက်များကမ္ဘာတဝှမ်းယနေ့အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာတက်ကြွစွာ MacOS ပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. ရသည်။ ဒီနေ့ကို Windows ကနေ operating system ကို၏ခြားနားချက်များသို့ သွား. , PC ကို၏ဘေးကင်းလုံခြုံအသုံးပြုမှုကိုသေချာသောဆော့ဖ်ဝဲ, အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စတူဒီယို, windose အောက်မှာမသာကြစေ, antivirus ကို၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်, ဒါပေမယ့်လည်း Apple ကဟာ့ဒ်ဝဲ၏အသုံးပြုသူများအတွက်အသင်းတော်ကိုလုပ်ပါ။
https://termotools.com my.termotools.com © MacOS 2019